Sintomy ny seranam-piaramanidina Bangkok VTBD & VTBS FSX & P3D - Freeware
Eto dia ny entana izay ahitana sceneries roa, Bangkok Suvarnabhumi International Airport (VTBS) Bible 1.5 sy ny malaza Don Muang International Airport (VTBD). Samy seranam-piaramanidina dia tafiditra amin'ny sary-tena textures, 3D trano, sns Mariho fa ny toerana manodidina ny seranam-piaramanidina Don Muang manana toetra tsara kokoa Graphics noho ny toerana manodidina an'i Bangkok Suvarnabhumi.
Suvarnabhumi Airport (rtgs: Suwannaphum, Thai fanononana: [sù.wān.ná.pʰūːm]) (Iată: BKK, ICAO: VTBS), fantatra koa amin'ny hoe (New) Bangkok International Airport, dia iray amin'ireo seranam-piaramanidina iraisam-pirenena roa manompo Bangkok, Thailand . Ny hafa iray dia Don Mueang International Airport. Suvarnabhumi no lehibe indrindra ao amin'ny seranam-piaramanidina izao tontolo izao amin'ny alalan'ny tanteraka faritra 2,980 hektara (7,400 hektara).
Suvarnabhumi nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny sidina an-trano voafetra ny fanompoana ao amin'ny 15 Septambra 2006, ka nanokatra ny ankamaroan'ny an-toerana sy iraisam-pirenena rehetra sidina ara-barotra ao amin'ny 28 Septambra 2006.
Ny seranam-piaramanidina amin'izao fotoana izao ny tena foiben'ny ho an'ny Thai Airways International, Bangkok Thai Airways sy Orient Airlines. Izany ihany koa ny manompo toy ny faritra vavahady sy ny fampifandraisana teboka isan-karazany avy any ivelany ho an'ny mpilanja.
Ny seranam-piaramanidina no misy ny zavatra taloha fantatra amin'ny anarana hoe Nong Nguhao (Cobra honahona) in Racha Thewa in Bang Phli, Samut Prakan, tokony ho 25 kilometatra (16 km) atsinanan'ny afovoan-tanànan'i Bangkok. Ny anarana Suvarnabhumi (avy Sanskrit: स्वर्णभूमि (IAST: Svarṇabhūmi, "Golden Tany")), no voafidy Mpanjaka Bhumibol Adulyadej sy manondro ny volamena fanjakana, hypothesised ny efa hita any ho any ao Azia Atsimo Atsinanana. (Source Wikipedia)
Don Mueang International Airport (Thai: ท่าอากาศยาน ดอนเมือง, Endrika: [dɔ̄ːn.mɯ̄ːaŋ], na colloquially araka ny Thai: สนาม บิน ดอนเมือง, Endrika: [sà.nǎːm.bīn.dɔ̄ːn.mɯ̄ːaŋ]) (Iată: DMK, ICAO: VTBD) (na koa [antitra] Bangkok International Airport) dia iray amin'ireo seranam-piaramanidina iraisam-pirenena roa manompo Greater Bangkok, ny anankiray ho Suvarnabhumi Airport ([New] Bangkok International Airport) (BKK). Ny seranam-piaramanidina dia heverina ho iray amin'ireo iraisam-pirenena tranainy indrindra eran-tany seranam-piaramanidina sy ny zokiny indrindra Azia fandidiana seranam-piaramanidina. Ary nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ho toy ny Royal Air Force Thai base tamin'ny 27 Martsa 1914, na dia efa nampiasaina teo aloha. Nanomboka tamin'ny sidina ara-barotra 1924, mahatonga azy ho iray amin'ireo tranainy indrindra eran-tany ara-barotra seranam-piaramanidina. Ny voalohany sidina ara-barotra dia ny fahatongavan'i amin'ny KLM Royal Holandey Airlines. Don Mueang Airport nakatona tao 2006 taorian'ny fanokafana ny Bangkok Suvarnabhumi vaovao Airport, talohan'ny nisokafan'ny tamin'ny 24 Martsa 2007 taorian'ny fanavaozana goavana. Koa satria ny fanokafana ny seranam-piaramanidina vaovao, dia efa lasa faritra commuter fiaramanidina Hub sy ny mitana ny toeran'ny vidiny ambany-airline Hub. Ao 2015, dia nanjary ny lehibe indrindra eran-vidiny ambany dia ambany mitondra seranam-piaramanidina
Don Mueang dia manan-danja foiben'ny an'i Azia sy ny foiben'ny ny Thai Airways International talohan'ny ny fanakatonana. Tamin'ny ny tendrony, dia nanompo ny ankamaroan'ny [fanazavana ilaina] rivotra ny fifamoivoizana ho an'ny firenena iray manontolo, miaraka amin'ny 80 Airlines miasa 160,000 sidina sy manazava 38 tapitrisa mahery mpandeha sy 700,000 taonina entana any 2004. Tamin'izay ny 14th seranam-piaramanidina be mpandeha indrindra eo amin'izao tontolo izao sy 2nd any Asia amin'ny mpandeha boky. Amin'izao fotoana izao, Don Mueang no tena foiben'ny for NOK Air, Thai AirAsia, Thai Lion Air, ary Orient Thai Airlines. (Source Wikipedia)